Fianjerana tamin’ny fiaramanidina :: Hita ny karandohan’ilay tovovavy anglisy 20 taona • AoRaha
Fianjerana tamin’ny fiaramanidina Hita ny karandohan’ilay tovovavy anglisy 20 taona
Hita tany Andranolava Avaratra, tanàna iray any Mahadrodroka-Anjajavy ao anatin’ny faritra Sofia ireo sisa tsy lanin’ny biby tamin’ny vatan’i Alan Cutland, ilay vehivavy anglisy, 20 taona, voalaza fa nitsambikina avy eny amin’ny fiaramanidina, tamin’ny 25 jolay lasa teo, tany Anjajavy-Mahajanga.
Tsy nitsahatra nikaroka hatrany ireo zandary telo nahazo iraka hitady an’io vahiny io taorian’ny fianjerany ka izao nahitam-bokany izao. Nanampy betsaka ireo mpitandro filaminana ny fokonolona any an-toerana. Ho tonga eto an-drenivohitra anio rehefa avy nalaina tamin’ny angidimby, tany amin’ilay toerana nahitana azy, ireo vatana sisa hita ireo.
“Karandoha misy volo, ilan’ny feny ary taolan-damosina sisa hita tamin’ny vatan’ilay tovovavy. Nahitana akanjo iray sy ilan-kiraro ihany koa tany amin’io toerana io. Ahiana ho lanin’ny biby izy rehefa nianjera tamin’ny tany. Toerana betsaka bibidia, indrindra ny fosa, tany amin’io nianjerany io”, hoy ny fitantaran’ireo zandary nahita ny razana.
Mpianatra manao fikarohana any ambany ranomasina no anton-dian’i Alan Cutland tany Anjajavy. Nanao fikarohana momba io fianarany io izy niaraka tamin’ny vehivavy anglisy iray voalaza fa mpampianatra azy. Nanana olana ny fikarohana nataon’izy ireo ka voatery nody izy roa vavy rehefa avy nampandre an’ireo ray aman-drenin’i Alan Cutland tany Angletera.
Tsy fantatra na ny noho ny fahadisoam-panantenana vokatr’io fanapahan-kevitra tsy maintsy nody tsy nisy vokatra io na noho ny antony hafa no nahatonga an’ilay vehivavy anglisy nanana olana ara-tsaina teny ambony fiaramandina.
Voalaza fa nanao krizy izy teny ambony teny ka voavohany ny varavaran’ny fiaramanidina. “Notazonin’ilay vehivavy niaraka taminy izy nefa tsy voatazony noho i Alan somary be vatana. Nitarika tamin’ny fianjerany izany. Efa nanidina folo minitra niala tao Anjajavy ilay fiaramanidina kely nitondra azy roa vavy no nitranga ny loza”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria.
Loza teny Ampitatafika